यौनजीवनमा मधुमेहले कुनै असर पार्छ कि पार्दैन ? - यौन जिज्ञासा र समाधान - साप्ताहिक
हाम्रो विवाह भएको १८ वर्ष पूरा भयो । म उमेरले ३८ वर्षकी भए भने उहाँ ४६ वर्ष पुग्नुभयो । यो अवधिमा मैले तीन स्वस्थ सन्तानकी आमा बन्ने सौभाग्य पनि पाएकी छु । अहिलेसम्म मेरो यौनजीवन पनि आनन्दायक नै छ । म स्वस्थ भए पनि तीन वर्षदेखि श्रीमानचाहिँ मधुमेह (डायबिटिज) बाट पीडित हुनुहुन्छ । उहाँ तीन–तीन महिनामा मधुमेह स्तर जाँच गराउनुहुन्छ । यस अवधिमा एक–दुई पटकबाहेक उहाँको सुगरको स्तर नियन्त्रित देखियो । उहाँ सामान्य ढंगले दैनिक कार्य गर्नुहुन्छ । तत्कालै हामी दुईबीचको यौनसम्बन्धमा यसको नकारात्मक असर पनि परेको छैन । यो उमेरमा पनि प्रत्येक रात एकपटक त सम्पर्क हुन्छ नै । दुवै जना पूरा मुडमा भएका बेला त रातको दुई पटक पनि हुन्छ, स्खलन र मात्रामा पनि कुनै समस्या छैन । हल्का स्पर्श तथा चुम्बनले पनि उहाँको लिंग उत्तेजित हुन्छ र उत्कर्षमा पुगेर वीर्यपात भएको केही बेरसम्म पनि लिंगको कडापन कायमै रहन्छ ।
मिठासले भरिपूर्ण हाम्रो यौनजीवनमा पछि गएर मधुमेहले कुनै असर पार्छ कि पार्दैन ? यौन जीवनमा मधुमेहको नकारात्मक असर पर्न नदिन के–कस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ला ? उहाँ मदिरा तथा चिल्लो–पिरोसमेत नखाने शाकाहारी हुनुहुन्छ । उहाँ बिहानदेखि बेलुकासम्म सक्रिय जीवन बिताउनुहुन्छ र दैनिक न्यूनतम एक घण्टा हिंड्नुहुन्छ । सम्भवत: निकै नियन्त्रित खानपिनका कारणले होला, मधुमेहपछि तीन वर्षको अवधिमा उहाँको तौल ७५ किलोग्रामबाट ६५ किलो भएको छ । उहाँको तौल अहिले स्थिर छ । मेरा केही महिला मित्रले मधुमेह पुरानो हुँदै गएपछि व्यक्ति कमजोर हुँदै जाने र लिंग नउठ्ने (लुलो हुने) भनेकाले म चिन्तित छु । कुनै कुलत नभएका मेरा श्रीमान्ले ध्यान वा साधनामा लीन भएझैं यौनसम्पर्क गर्ने हुनाले म हरेक दिन त्यो क्षणको प्रतीक्षामा हुन्छु । फोरप्ले र आफ्टर प्लेपछि मीठो निद्रा अनि बिहान गजबको फुर्ती आउँछ । उहाँसँगको यो सुखलाई बाँचुन्जेल अनुभूति गर्न चाहन्छु । त्यही भएर बढ्दो उमेर तथा मधुमेहसँगै यौनजीवनलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने उचित मार्गदर्शन एवं परामर्शका लागि अनुरोध गर्दछु ।
- गृहिणी, मोरङ
तपाईंहरू दुवैले यति लामो विवाहित जीवनमा पर्याप्त यौन आनन्द लिइरहनुभएको कुराले हर्षित तुल्याएको छ । तपाईंले मधुमेहको यौनजीवनमा हुन सक्ने सम्भावित प्रभावका बारेमा सोधेर स्वास्थ्यप्रति
सचेत व्यक्तिको परिचय पनि दिनुभएको छ ।
सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा मधुमेह भएका व्यक्तिको रगतमा चिनी (ग्लुकोज) को मात्रा बढी हुन्छ । लामो समयसम्म अनियन्त्रित रूपमा चिनीको मात्रा बढी भैरहे त्यसले रक्तनसा अनि स्नायुलाई पनि हानि पुर्‍याउँछ । पछि गएर यसको प्रभाव यौन उत्तेजना, योनि रसाउने वा लिङ्ग उत्तेजनाजस्ता कुरामा पर्छ । लिङ्गमा रगत भरिन ठीक समयमा नाइट्रिक एसिड नामको रसायन निस्कन्छ, जसले रक्तनसाका मांसपेशीलाई खुकुलो हुन रसायनिक सन्देश वाहकका रूपमा काम गर्छ । मधुमेहका कारण रक्तनसा वा स्नायुमा खराबी आउँदा यसले राम्रोसँग कार्य गर्न सक्दैन ।
त्यसबाहेक मधुमेह भएका व्यक्तिमा अन्य कतिपय कारणले पनि (यौनजीवनमा) नकारात्मक असर परेको हुनसक्छ । मधुमेह भएका कतिपय व्यक्तिमा उच्च रक्तचापको समस्या हुनसक्छ । यसले पनि रक्तनसामा हानि पुर्‍याउँछ । त्यसैगरी उनीहरूमा खराब किसिमको कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढी भएको हुनसक्छ, जसले रक्तनसालाई साँगुरो बनाएको हुनसक्छ । जीवनशैलीको कुरा गर्ने हो भने पनि मधुमेह भएका कतिपय व्यक्तिले धूमपान गर्ने, खानामा परहेज नगर्ने हुन सक्छ । धूमपानले स–साना रक्तनसामा हुने रगतको प्रवाहलाई कम गर्छ । अनियन्त्रित रूपमा चिनीको मात्रा कम वा बढी हुँदा थकाइ लागेजस्तो हुने वा जाँगर वा स्फुर्ती नहुने स्थिति हुन्छ, जसले यौन क्रियाकलामामा संलग्न हुने कुरामा नकारात्मक असर पार्छ ।
हुन त तपाईंको यौनजीवनमा कुनै समस्या छैन, तैपनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के भने पाको उमेरका कारण पनि बिस्तारै यौन सक्षमतामा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यसको दोष अनावश्यक रूपमा मधुमेहलाई दिनुको सट्टा समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । अव्यवहारिक अपेक्षा राख्नु पनि मनासिव हुँदैन । हरेक पटक चरमसुख प्राप्त गर्नैपर्ने मानसिकता वा दबाबबाट मुक्त रहनुपर्छ, अन्यथा त्यसको नकारात्मक असर पार्छ । तनाव, चिन्ता वा भय कम गर्न सक्नुपर्छ । सहज वातावरण एवं तनावरहित भएर यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा फाइदा मिल्छ । आवश्यकताभन्दा बढी पीर गर्दा समस्या अझ बल्झिन सक्छ ।
बाहिर आउन नदिइएको शुक्रकीटले असर पार्छ ?